Devozione a Dio Padre nel mese di Agosto: il Rosario | Ilblogdellafede
Nraranye nye Chineke Nna n’August: Rosary
RUPU N’AKA CHUKWU CHUKWU
Onye nke Nna anyị ọ bụla a ga-agụ na ya, a ga-azọpụta ọtụtụ mkpụrụ obi site na ntaramahụhụ ebighi ebi, a ga-emekwa ka ọtụtụ mkpụrụ obi nwere onwe ha pụọ ​​na ihe mgbu nke pọgatrị. Ezinaụlọ a ga-agụgharị Rosary a ga-enweta ọpụrụiche pụrụ iche, nke a ga-enyefekwa site na ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ndị niile ji okwukwe na-agụ ya ga-anata nnukwu ọrụ ebube dị oke ebube dị ka a hụtụbeghị ya na akụkọ nke Nzukọ-nsọ.
+ N’aha nke Nna, Ọkpara na Mụọ Nsọ. Amen.
Chineke, biko, zọpụta m.
Onye-nwe-ayi, me ngwa iyerem aka.
Otuto diri Nna.
N’ime ihe omimi nke mbụ anyị tụgharịrị uche banyere mmeri nke Nna n’ogige Iden mgbe, mgbe mmehie Adam na Iv gasịrị, o kwere nkwa ọbịbịa nke Onye nzọpụta.
“Onye-nwe Chineke wee sị agwọ ahụ: Ebe i meworo nke a, bụrụ onye a bụrụ ọnụ ka ị bụrụ karịa anụ ụlọ niile karịa anụ ọhịa niile, n'afọ gị ka ị ga-eje ije na uzuzu ị ga-eri ụbọchị ndụ gị niile. M ga-etinye iro n’etiti gị na nwanyị ahụ n’etiti agbụrụ gị na usoro ọmụmụ ya: nke a ga-akụri isi gị, ị ga-emerụkwa ya n’ikiri ụkwụ ”. (Gn 3,14-15)
Ekele Marie, Nna anyi 10, otuto diri Nna
Nna m, ezigbo Nna, m na-enyefe onwe m gị, enyere m onwe m n’aka gị.
Mmụọ ozi nke Chukwu….
N’ihe omimi nke abụọ anyị tụgharịrị uche banyere mmeri nke Nna n’oge nke “Fiat” Meri n’oge mkpọsa.
Mọ-ozi ahu gwara Meri, si, Atula egwu, Meri, n'ihi na i hutala amara n’ebe Chineke nọ, le, ị ghapu ime nwa nwoke, i gha-amuta ya Jisos, onye ahu buru onye uku ma akpo Nwa nke Onye kachasi ihe nile elu. Onye-nwe-ayi Chineke g willnye ya oche-eze Devid, nna-ya, gabu kwa ulo Jekob ibu eze rue mgbe ebighi ebi. Meri we si, Le, mu onwem, abum orù-nwanyi nke Onye-nwe-ayi, ka ihe i kwuworo me. (Lk 1,30-38)
Onye nke Chukwu.
N’ime ihe omimi nke ato anyi tughariri uche banyere mmeri nke Nna n’ogige Getsemeni mgbe o nyere Okpara ya ike nile.
Jizọs kpere ekpere, sị: “Nna, ọ bụrụ na ịchọrọ, wepụ iko a n'ebe m nọ! Agbanyeghị, ọbụghị nke m, kama ka uche gị mee ”. Mọ-ozi nke elu-igwe we si ya kasie ya obi.
N’ime nhụjuanya, o kpesiri ekpere ike karị, ọsụsọ ya wee dị ka mmiri nke ịda n’ala. (Lk 22,42-44)
Jizọs bịarutere wee sị ha, "arenye ka ị na-achọ?" Ha zara ya: "Jizọs onye Nazaret". Jizọs wee sị ha: "Ọ bụ m!". Ozugbo ọ sịrị "Ọ bụ m!" Ha na-agbada, daa n'ala. (Jn 18,4: 6-XNUMX)
Onye nke Chukwu
N’ime ihe omimi nke anọ anyị na-atụgharị maka mmeri nke Nna n’oge ikpe nke otu.
Mgbe ọ ka nọ ebe dị anya, nna ya hụrụ ya wee gbaa ọsọ gbakwute ya, tụda ya n'olu wee susuo ya ọnụ. Ọ gwaziri ndị ahụ na-ejere ya ozi, sị: “N'oge na-adịghị anya, weta uwe mara mma nke a karịa ma yikwasị ya, tinye mgbanaka na mkpịsị aka ya na akpụkpọ ụkwụ ka anyị mee ememme, n'ihi na nwa m nwoke nwụrụ ma dịghachi ndụ, furu efu, achọta ya. " (Lk 15,20-24)
N’ime ihe omimi nke ise anyi n’atughari banyere mmeri nke Nna n’oge ikpe nke uwa.
Mu onwem hu-kwa-ra elu-igwe ọhu na uwa ọhu, n'ihi na elu-igwe na ala nke mb beforee mbu agafuwo, oke osimiri ahu atala. Ahụkwara m obodo nsọ ahụ, bụ Jerusalem ọhụrụ, ka o si n’eluigwe daa, si n’ebe Chineke nọ dị njikere dị ka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ a chọrọ mma maka di ya. M wee nụ ka otu olu dị ike si n'ocheeze ahụ na-apụta: Lee ebe obibi Chineke dị n'etiti mmadụ! Ọ ga-ebikwa n’etiti ha, ha ga-abụ ndị nke ya, ọ ga-abụkwara Chineke “ha:” Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n’anya ha; ọnwu, iru-uju, ma-obu nkpab ,u, ọnwu adighi kwa, n'ihi na ihe mbu agabigawo. (Ap 21,1-4)
← Na post gara aga Gara aga post:Sant'Eusebio di Vercelli, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 2nd
Ọzọ Post → Post ozo:Ozi nke August 2 na Mirjana, Nwanyị nwanyị anyị na-ekwu okwu na Medjugorje